Wiil yar oo saddex jir ah oo lagu bireeyey deegaan ku dhow Laascaanood – STAR FM SOMALIA
Wararka ka imanaya magaalada Laascoonaad ayaa sheegaya in ilmo yar oo saddex jir ah lagu gowracay deegaan lagu magacaabo Dabataag oo qiyaastii u jirto 48km.
Wiilkan yar ayaa la sheegay in laga watay meel ku dhow guriga reerkooda ay degenaayeen lana helay markii dambe wiilkan yar oo dhaawacyo halis ah ay ku yaalaan.
Aabaha dhalay wiilkan oo la yiraahdo Maxamuud Yuusuf Xasan ayaa u sheegay VOA in wiilkiisu uu dhaawicii gowracaasi ka soo gaaray ugu dhintay isbitaal ku yaalla magaalada Hargeysa.
Maxamuud ayaa sheegay in baadi goob ay ugu jiraan dadka deegaanka sidii loo soo heli lahaa qofkii ka dambeeyey falkan.
Falkan ayaa ka naxay dadka ku nool deegaanka Dabataag oo ah deegaan ay ku nool yihiin dad xoolo dhaqato ah, waana markii ugu horeysay oo fal noocan oo kale ah uu ka dhaco deegaankaas.
Al-Shabaab oo sheegay in Sarkaal ka tirsan Booliska Kenya ku dileen Gobolka Xeebta